तपाईको ई-कमर्स साइट - Amazon, Ebay, Allegro र Etsy Propars E-export को साथ
Propars ई वाणिज्य एकीकरण
Propars संग तपाइँको ई-वाणिज्य साइट बाट घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रबन्ध गर्नुहोस्
उत्पादन / आदेश ई-वाणिज्य
यो Propars संग तपाइँको ई-वाणिज्य साइट बाट ई-निर्यात गर्न धेरै सजिलो छ!
सबै स्टक स्वतः ट्रयाक छन्। मूल्य र स्टक परिवर्तन तुरन्त प्रतिबिम्बित हुन्छन्।
तपाइँ XML को साथ Propars लाई तपाइँको ई-वाणिज्य साइट मा तपाइँको उत्पादनहरु हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको ई-वाणिज्य साइट मा वर्ग संरचना अनुसार, तपाइँ बजार मा बिक्री को लागी तपाइँको उत्पादनहरु खोल्न सक्नुहुन्छ।
स्वचालित अपडेट को साथमा, तपाइँको ई-वाणिज्य साइट मा नयाँ थपिएका उत्पादनहरु Propars मा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, र तपाइँको पसलहरु र बजार मा स्टकहरु लाई अपडेट गरीन्छ।
तपाइँ आफ्नो ई-वाणिज्य साइट अप टु डेट राखेर स्टक र मूल्य परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्य परिवर्तन तपाइँ तपाइँको ई-वाणिज्य साइट मा बनाउनु हुन्छ तुरन्त बजार मा प्रतिबिम्बित हुन्छ जहाँ उत्पादन बिक्री मा छ।
Propars ई-निर्यात समाधान संग, तपाइँ तपाइँको ई-वाणिज्य साइट बाट ई-निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ।
Propars marketplaces एकीकरण संग एक स्क्रीन मा ई-वाणिज्य प्रबन्ध गर्नुहोस्
एकल स्क्रिनमा तपाइँका सबै अर्डरहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, एक क्लिकको साथ इनभ्वाइस! यसले बजार स्थानहरू र ई-कमर्स साइटहरूबाट आउने अर्डरहरूको लागि बल्कमा ई-इनभ्वाइसहरू जारी गर्न सक्छ; तपाईं बल्क कार्गो फारम छाप्न सक्नुहुन्छ।